राधा चौधरीमाथिको अन्याय, एनजिओको खेती र निरीह सरकार
नारी दिवश देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईरहेको समयमा नै कैलालीको घोडाघाडी नगरपालिका वडा नं ५ देउकलीमा २० वर्षीया राधा चौधरीमाथि वोक्सिको आरोपमा निर्घात कुटपिट भयो । नारी दिवशमा नारी समानता, न्याय, मुक्ति र नारीमाथीको अन्याय अत्याचारको विरुद्धमा देशभरको विभिन्न तारे होटलहरुमा डलरको कार्यक्रम भईरहँदा देउकलीमा राधा चौधरी मृत्यृ सँग लडिरहिन् । देशमा महिलामा भएको असमानताको विरुद्ध राज्यबाट वर्सेनि रकम खर्च भईरहेता पनि हजारौं नारीहरु बोक्सी होस वा अन्य नाममा कुटिइरहेका छन् । यसका मुख्य कारण चेतनाको कमि त रह्यो नै समाज र देशका समाजसेवी वुद्धिजिवी भनाउदाहरुको पाखण्डी सोच पनि हो ।
समाजमा अशक्त, वृद्धा, गरिब, असहाय व्यक्तिहरु हरेक समाजमा वोक्सी अथवा अन्य कारणवाट अपहेलित भइरहेका छन् । कुटिइरहेका छन् । समाजवाट तिरस्कृत भइरहेका छन् । तर पनि यसको न्यूनिकरण भन्दा पनि समाजबाट नै यसलाई वढावा दिने काम भइरहेको छ । जुन समाजको निरन्तरता नै बनिरहेको छ । देश संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेर के भयो । व्यक्तिको चेतनामा जबसम्म परिवर्तन हँुदैन र कारबाही गर्ने निकाय मुकदर्शक बन्दछ तब लाखौं राधा चौधरीहरु अनायासै वोक्सीको नाममा कुटाई खाइरहन्छन् । अपहेलित भइरहन्छन् । समाजमा प्रताडित भईरहन्छन् ।
२१ औं शताब्दीको प्रविधिको युगमा समेत कोही नारी विभिन्न बहानामा कुटपिटको शिकार भइरहने, देशमा अन्धविश्वासलाई निरुत्साहित भन्दा पनि वढावा दिइरहने जिम्मेवार निकायको चरम लापरवाहीको कारण आज पनि हजारौ नारीहरु वोक्सीको आरोपमा समाजमा पीडित छन् । जबसम्म चेतनाका विकास र सम्वन्धित निकाय जिम्मेवारीवाट विमुख रहन्छ तवसम्म यस्ता घटनाहरु निरुत्साहित होईन प्रोत्साहित भईरहन्छ । स्थानीय पार्वती चौधरी विमारी हुनुका कारण खोज्नुभन्दा पनि अझै अन्धविश्वासमा नै रमाईरहदा देश अझै पनि कहाँ रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ ।
नारी दिवसका दिन चारतारे होटलमा बसेर भाषण ठोकिरहदा कैलालीको देउकलीमा राधा चौधरीले भोग्नु परेको पीडा सायद कसैले कल्पना पनि गर्न नसक्ला । अन्धविश्वास, कुरीतित, कुसंस्कारले जकडिएको समाजमा अझै पनि आस्था र विश्वासले अझै पनि कति नरनारीहरुले पीडा भोगिरहनुपर्ने हो टड्कारो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।
पीडक रामवहादुर चौधरी भोले बाबाले अझै पनि सर्वसाधारण जनतालाई भ्रममा राख्न खोज्नु र विरामी पार्वती चौधरीलाई उपचार गर्ने निहँुमा पीडित राधा चौधरीलाई लात्तैलात्ताले हान्नुले सिंगो समाज र सम्वन्धित निकायको खिल्ली उडाएको छ । कोही आफँैमा बोक्सी र धामी हुदैन भन्ने समान्य कुरा पनि हेक्का राख्न नसक्ने समाज अथवा समाज निर्माणको मसिहा सम्झने जनप्रतिनिधी समेत उल्टै पीडकलाई कारावाही गर्नुभन्दा पनि प्रश्रय दिनुले झन् यस्ता घटनालाई मलजल गरेको देखिन्छ । प्रहरी श्रोत भन्दछ, ‘घटनापछि हामीले पीडकलाई समातेर ल्याएका थियौं । पीडित राधा चौधरीलाई जाहेरीका लागि भन्दा मिलापत्र गरियो ।’ यस्तो जवाफले भोलि हाम्रो समाज कहाँ जादैछ ? कारवाही गर्ने निकाय र देशमा शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको निकायले जवाफ दिनु पर्दैन ? कसैको डर धाकधम्कीले कानुनको धज्जी उड्ने भए किन चाहियो प्रहरी र प्रशासन ? जनतालाई शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको रक्षा गर्ने कि शक्ति केन्द्रको दलाली ? कैलाली प्रशासन सामु टड्कारो पश्न खडा भएको छ । जव पीडित सम्पूर्ण समाजको अगाडि नै कुटाई खानुपरेको छ । जीवन रक्षाको लागि याचना गर्नु परेको छ । बाँच्न सकिन्छ कि भन्ने आशमा जे पनि बक्नु परेको छ । त्यस्ता व्यक्तिले उजुरी दिएन भनेर केही कारबाही नगर्नुले प्रशासन र प्रहरीको जिम्मेवारीतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ ।
राधा चौधरीको यो वोक्सीको आरोपमा भएको घटनाले सिंगो देशमा नै नारी हकहितका लागि काम गर्ने विभिन्न निकायको खिल्ली उडाएको छ । नारीहरुको मुख्य समस्या के हो ? समाजमा नारीहरु के–के विषयमा पीडित बनिरहेको छ ? भन्ने समान्य चेतनाको विकास गर्न पनि नसक्ने नारी संघसंगठनहरुलाई राधा चौधरीको यो हिंसाले प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ । अझै सवैभन्दा गम्भीर प्रश्न भनेको भोलेबाबा भन्ने रामबहादुर चौधरीलाई मेयर र जनप्रतिनिधिहरुको टोलीले नै प्रश्रय दिएर उनीहरुको हैसियत उदाङ्गो पारिदिएको छ । कारबाही गर्ने निकायसमेत जमात र भीडको पछाडि लाग्दा यस्ता घटनाहरुले झन् प्रश्रय पाएको वुभ्mन गाह्रो छैन ।
नागरिकको मौलिक हकअन्र्तगत शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई समाजमा विभिन्न तत्व र नाममा महिलामाथि विभिन्न प्रकारको हिंसा बग्रेल्ती देख्न सकिन्छ । यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्नका लागि कानुन बमोजिमको कारबाही नै हो । तर यसमा ध्यान नदिँदा र मिलापत्रका नाममा सम्वन्धित निकायले नै महिलामाथि हुने यस्ता घटनालाई प्रश्रय दिइरहेका छन् । जुन सम्बन्धित निकायको लापरबाही हो । मिलापत्रका नाममा हुने यस्तो गतिविधिले समाजलाई झन कुरीति, अन्धविश्वासलाई मलजल गर्ने कुरामा सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ । हैन भने शक्ति र सत्ताको पछाडि लाग्ने हो भने शान्ति सुरक्षा केवल शक्ति हुनेहरुका लागि मात्र हो भन्ने कुरा पुष्टि हुनेछ र सर्वसाधारणको सरकार र सम्वन्धित निकायप्रतिको आस्था र गरिमा घटनेछ ।
भाषणमा ठूलाठूला करा गर्ने महिला अधिकारकर्मीहरु अवसरका लागि मात्र महिलामा समानता खोज्नु, शक्तिका लागि मात्र महिला मुक्तिका कुरा गर्ने शैलीले सिंगो महिला अधिकारकर्मीहरुको खिल्ली उडाएको छ । समानता र न्याय राजधानी मात्र होइन देशका दूरदराजसम्मका लागि हो भन्ने वुभ्mन नसक्ने महिला अधिकारकर्मीहरुले बेलामा नै महिलामाथिको चरम हिंसाको लागि आवाज उठाउनुपर्नेछ । होइन भने महिलाहरु सधैं केही न केही विषयलाई दिएर मर्ने, अपहेलित हुने र अत्याचार सहनुपर्ने भइरहनेछ ।
सिंगो समाजलाई दुर्गन्धित गर्ने कैलाीको देउकलीमा भएको यो घटनाको पीडक पार्वती चौधरी, भोले बाबा भन्ने रामवहादुर चौधरीलाई कानुन वमोजिम कारवाही होस् । दबावको भरमा मात्र काम गर्ने नत्र सर्वसाधारणलाई मात्र कानुन नाममा दुख दिने प्रहरी प्रशासन देशको कानुन अनुसार काम गर्न तैयार हुनुपर्दछ । नभए यस्ता घटना समाजमा घटिरहनेछ । कारवाही गर्ने निकाय नै मेलमिलापको नाममा पीडकलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको राज्यद्रोह शिवाय केही हुन सक्दैन । समाजको त्यो भीडमा पीडित राधा चौधरीको पुकार सुन्ने त्यत्रो समाजमा कोहि भएनछ, धन्न हाम्रो चेतना र मानवता !